” ဆေးပေါင်း ခ သည့် မယ်ဇလီ “
” ဆေးပေါင်း ခ သည့် မယ်ဇလီ ” ( စုစည်းထားပါသည် ) မဲဇလီပင်အကြောင်းရေးလျှင် တန်ဆောင်မုန်းလကို ချန်လှပ်ထား၍မရပေ။ မဲဇလီပင်သည် တန်ဆောင်မုန်း လ၏ ဖွားဖက်တော်ဖြစ် သည်။ . တန်ဆောင်မုန်းသည် ဗြိစ္ဆာရာသီ၊ ကင်းမြီးကောက်အမှတ်အသားရှိသဖြင့် ကင်းမြီး ကောက်၊ ကင်းပုစွန်တို့နှစ်သက်သည့် လဟုလည်းပြော၍ရ၏။ […]
လူတိုင်း ထီပေါက်ချင်ကြတယ်.. ဒီနည်းကို မသုံးကြလို့ မပေါက်ကြသေးတာပါ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာတော်…။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ် အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူ ဖော်ပြအပ် ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ […]
ပြောင်လက်တောက်ပနေတဲ့ဆံကေသာရဖို့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း (၄) ခု
ပြောင်လက်တောက်ပနေတဲ့ဆံကေသာရဖို့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း (၄) ခု ဆံသားပြောင်လက်တောက်ပနေဖို့ဆိုတာ အဓိကအချက်က ဆံသားကောင်းနေမှရပါမယ်။ ဆံသားကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် ဆံသားဟာ အာဟာရအပြည့်ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ အာဟာရရှိစေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆံပင်ကို ပုံမှန်ပေါင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်လက်တောက်ပနေတဲ့ ဆံကေသားကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ သိသာတဲ့ရလဒ်ကိုရချင်ရင် တစ်ပတ်ကို (၁) ကြိမ် ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆံပင်ပေါင်းတင်ကြည့်ပါလား။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် ရှားစောင်းလက်ပပ် […]
သစ်မင်း သိမိသမျှ ဗဟုသုတပါ။ သစ်တို့ရဲ့ဘုရင်မို့ရရှိသူတွေ သိမ်းဆည်းကြပါတယ်။ တောတောင်ကြီးတွေမှာသာ ပေါက်တတ်ပြီး။ မကောင်းတဲ့ သစ်ဆိုး၊ သစ်တောက် သစ်မျက်များနဲ့ သစ်ဘီလူး။ သစ်စုန်းတွေကိုနိုင်တယ်ယုံလို့ ဆောင် ထားတတ်ကြပါတယ်။ အချို့လည်း အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးကြပါတယ် ဆေးအသုံးအဖြစ် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်ပါက နနွင်းမှုန့် ဆား သစ်မင်းခေါက်ကိုသွေးလိမ်းပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။ […]
ကားဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက်
ကားဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက် ယနေ့ခေတ်ကားတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေရှိနေပါပြီ၊ ပြီးတေည့ ကွန်ပြူတာတွေကလည်း အားလုံးကိုချောမွတ်အောင်သွားစေနိုင်ဖို့၊ လွဲမှားနေတဲ့ အမိန်ပေးမှုတွေကနေ ဖြစ်စေတဲ့ ကားပိတ်ခြင်းတွေ ၊ကားမောင်သူတွေကို ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ငြင်ဆိုနိုင်စွမ်းတွေက ကောင်းတာတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ဦးတည်နေပါတယ်၊ […]
“အရင်ကထက် ကံဇာတာတက်လာစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၆)ခု”
“အရင်ကထက် ကံဇာတာတက်လာစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း (၆)ခု” တချို့လူတွေက အမြဲကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် အဆင်ကို ပြေနေတာပါပဲ။ သူတို့ပုံစံက သူတို့လိုချင်တဲ့အရာတိုင်းကို ရနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ သင်လည်း ကံကောင်းတဲ့လူတွေလို ဖြစ်န်ိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ အရင်ကထက် ကံဇာတာတက်လာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်.. ၁။ အကောင်းမြင်စိတ် ကိစ္စတစ်ခု […]
ဖုန်းကိုင်တဲ့ ပုံစံက ဖော်ပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့”အကျင့်စရိုက်”
သင် ဖုန်းကိုင်တဲ့ ပုံစံ က သင့် အကျင့် စရုိုက် ကို ဖော်ပြနေတယ် ဆိုတာ သိပါသလား ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ။ ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့အကျင့်စရုိုက်တွေကို ခန့်မှန်းလို့ရနေတယ်ဆိုရင် အံ့သြဖို့ကောင်းပါသလား။ ပုံထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ သင် ဘယ်လို အကျင့်စရုိုက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မှန်တယ်ဆိုရင် သင်ကဘယ်နံပါတ်လဲဆိုတာ ကွန်မန့် […]
ခြင်ဆေးခွေ အမြဲလိုလိုသုံးမိနေပြီဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ သိထားရမည့် အချက်များ
ခြင်ဆေးခွေ အမြဲလိုလိုသုံးမိနေပြီဆိုလျှင် မဖြစ်မနေ သိထားရမည့် အချက်များ သင့်အိမ်မှာ ခြင်ဆေးခွေနှင့်ပရုတ်လုံးတွေံ အသုံးပြုနေပါက ဒီစာစုလေးကို မဖြစ်မနေ သိထားသင့်ပါတယ် ကမ္ဘာ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်အရ နှစ်စဉ် အမေရိကန်လူမျိူး ၃၃.၁မီလ်ီယန်လောက်ဟာ အိမ်သုံးပစည်း များကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းကို ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းဟာ အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွင်ပါဝင်သော ဓာတုပစည်း များကြောင့်လို့ […]
သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ) မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်ရအောင်လို့ တင်ပြရခြင်းပါ
သမီးရှင်တွေ သတိထားဖို့ (နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာ ပါ) မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်ရအောင်လို့ တင်ပြရခြင်းပါ မရေးချင်ပေမယ့်…. ရေးလိုက်ပါဦးမည်။ ဒီနေ့ဆေးခန်းမှာ case2ခု တပြိုင်တည်း ရပါသည်။ ပထမ case က ၂၃နှစ်ပါ။ ကျမရဲ့ထုံးစံက ultrasoud ကြည့်ရင်း early pregnancy […]